Caalamka, 09 August 2018
Khamiis 9 August 2018
Sacuudiga oo Canada ka dalbaday raalli-galin
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay inuusan soo laaban doonin xiriirkii diblamaasiyadeed ee ay la laheyd Canada, ilaa ay dowladda Canada ka bixineyso raalli-galin.
Soomaaliya iyo Jabuuti oo la Saftay Sacuudiga
Dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa qaatay mowqif taageero oo ay ku taageerayaan Sacuudiga, khilaafka kala dhaxeeya Canada.
Tirada ISIS ee Afghanistan ku Sugan
Ururka ISIS ee ku sugan dalka Afghanistan oo loo yaqaano IS-Khorasan ayaa la aaminsan yahay inuu haysto tiro ka badan 1,000 dagaalyahan, kuwaas oo badankoodu ay ku sugan yihiin gobolka koonfurta dalka ku yaalla ee Nangarhar
20 Sano Guuradii ka soo Wareegatay Weeraradii Safaaradaha Mareykanka ee B/Afrika
Labaatan sano ayaa ka soo wareegatay markii maanta oo kale, 7-dii bishii August sanadkii 1998-dii uu ururka Al-Qaacidda qaraxyo ku weeraray safaaradaha Mareykanka ee bariga Afrika.
Cuna-qabateynta Iran oo Hir-gashay
Mareykanka ayaa mar kale dib ugu soo rogey dalka Iran cunaqabateyntii dhaqaale. Cunaqabateyntan ayaa markeedii hore Iran loogu soo rogey si loo xadeeyo barnaamijkeedii nukliyeerka, waxaase markii danbe looga qaadey heshiis calami ah sanadkii 2015-kii.
91 qof oo ku dhimatay dhul-gariir ku dhuftay Indonesia
Waxaa billowaday dadaallo jasiiradaha loo tamashlo tago ee dalka Indonisia looga dad-gureeynayo inka badan kun dalxiisayaal ajanabi ah, maalin uun kadib markii markii uu dhul gariir xoog leh ka dhacay waqooyiga dalkaasi.
Venezuela: Goob uu Ka Qudbeynayay Madaxweyne Maduro oo La Weeraray
Dayaarad ama dayarado nooca drones-ka loo yaqaan ee aan duuliyaha la socon, ayaa weeraray goob uu ka jeedinayay qudbad Tv-ga si toos ah looga sii daynayay madaxweynaha Venezuela, Nicolas Maduro, gudaha magaalada Caracas Sabtidii, waxana la sheegaya in aysan wax dhaawac ah madaxweynuhu soo gaarin.
Weerar lagu qaaday xabsi ay maamulaan Taliban
Ciidamada kumaandooska dalka Afghanistan ayaa weerar ku qaaday xabsi ay maamulaan Taliban oo ku yaalla gobolka Koonfureed ee Helmand, waxayna sii daayeen 61 maxbuus.
Mareykanka oo xayiraad saaray wasiiro Turkish ah
Turkey ayaa sheegtay inay si xooggan uga soo horjeedo go’aanka dowladda Mareykanka ay cunaqabateynta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiga ka tirsan, sababo la xiriira wadaad diinta kirishtanka faafiya oo Mareykan ah, kaasi oo laba sano ku dhow ku xiran Turkiga.
China: Booliiska oo la Baxay Macallin Jaamacadeed
Macallinkan ayaa dhaleecayn u jeedin jiray diiwaan xuquuqda aadamaha ee Shiinaha, iyada oo xiliga guriga lagu jabiyey uu macallinku ku jiray wareysi khadka telefoonka ah oo toos ah uu la lahaa telefishanka VOAda ee afka Mandarinka oo ah afka dalka Shiinaha lagaga hadlo.